Hal kaan ka baro sifo qalbiga Dumarka ku hano karto! | Gaaloos.com
Home » galmada » Hal kaan ka baro sifo qalbiga Dumarka ku hano karto!
Hal kaan ka baro sifo qalbiga Dumarka ku hano karto!
Waxaa hubaal ah dumarku qancintooda ineeysan aheyn wax fudud halka raga in la qanciyaa aay tahay mid adag.
Maqaalkaan Oo aad ka daalacaneeysaan boga arimaha jaceylka iyuo qisooyinka kobciye.com waxaa kale ee uu ku bari doonaa waxyaabaha dumarka aay jaceylyihiin kuna reebi doono xusuus aan salguurin inteey ku noolyihiin aduunyada.
Xassan: Hal mar oo keliya ayaan kusoo booqan lahaaa.
Waxaa jiro Arimo faro badan oo ka turjumayo dumarku waxeey jaceylyihiin kuna reebo xusuus aan ebid sal guurin, balse maantay afartaasi qodob oo muhiimka ah ayaanu kusoo koobeynaa.
Title: Hal kaan ka baro sifo qalbiga Dumarka ku hano karto!